Chengeta Intel Graphics Driver For Windows 10
Kana wakaisa ikopi itsva yeko Windows 10 kana vanoda dzorerazve mutyairi we graphics kugadzirisa nyaya dzinoratidzirwa, iwe unogona kuda kukodha shanduro yezvino yeIndel graphics mutyairi wako Windows 10 kuiswa.
Muchirongwa ichi, tichaona kuti tingatora sei shanduro yezvino yeIndel HD graphics neIndel graphics maderezeri Windows 10.
Chii chinowanzoshandiswa cheIndel graphics driver? Windows 10?
25.20.100.6618 ndiyo shanduro yakapfuura yeIndel graphics mutyairi kunze uko Windows 10. Uyu mutyairi anowirirana neIntel 6th, 7th, 8th, uye 9th rekushandura. Pamusana pe4th uye 5th maitiro ekugadzira, 15.40.42.5063 ndiyo shanduro yemazuva emutyairi we graphics.
Uye kana iwe uine 3rd chizvarwa cheproductor, 15.33.47.5059 ndiyo shanduro yezvino.
Kana usina chokwadi nezvezera rako reIntel processor, unogona kutarisa kwatiri nzira yekuongorora chechi yeIntel processor iwe pane PC yako mutungamiri.
Nzira yekutarisa sei Intel graphics driver driver yakaiswa pa PC yako?
Usati wada kukoshesa shanduro yezvino yeIndel graphics mutyairi, zvakakosha kuti uzive shanduro yezvino yemaikirini yekutya yakaiswa pa PC yako. Kuti uite izvozvo:
Step 1: Kungofa pane Bhokisi Rokutanga pane bharina rebasa uye ipapo tora Device Device sarudzo yekuzarura zvakafanana.
Step 2: kuwedzera Ratidzai adapters chikamu kuti uone intel yako yokupinda mafirimu. Kungofa pavanopinda uye pota Properties.
Step 3: pasi mutyairi tab, iwe unogona kuona nhamba yehurukuro yeIndel graphics mutyairi ikozvino yaiswa pa PC yako.
Nzira yekutora sei Intel graphics mutyairi?
Kana yako PC inotungamirirwa ne 6th, 7th, 8th kana 9th chizvarwa cheIndel processor, unogona kuwana shanduro yezvino yeIndel graphics driver Windows 10 kubva pakusangana kunotevera.
Cherechedza kuti Microsoft yakatamira kune imwe nzvimbo itsva yeDhift Drivers architecture kutanga nayo Windows 10 version 1809 (October 2018 Update). Nokuda kwekuchinja uku, Intel iye zvino anopa DCH version ye graphics mutevedzeri we 6th uye gare gare chizvarwa chekugadzirisa. Iwe zvino unogona kuwana zvakawanda pamusoro peDCH mafaira ekufambisa nekushanyira iyi peji yeIndel.
Kamwezve, tarisa kwatiri kuti tingaita sei chengetera kuti chii chinonzi Intel processor yako tungamira kuti zvive nyore.
Pamusoro pe6th, 7th, 8th uye 9th chizvarwa Intel vatambisi:
Chengetedza Intel graphics mutyairi
Pamusoro pe4th uye 5th chizvarwa Intel vatambisi:
Zvekuzvarwa kwe3rd Intel Processors:
Kana PC yako yakagadzirirwa neC2nd generation processor, hapana yepamusoro yeIndel graphics driver Windows 10. Izvozvo zvakati, mutyairi wepurogiramu anotsigira Windows 7 uye Windows 8 / 8.1 inoita kunge inoenderana ne Windows 10 naizvo.
Dhawunorodha chaiyo Intel giraidhi mutyairi uchishandisa Intel Mutyairi & Tsigiro Mubatsiri
Intel Mutyairi & Mutsigiri Mubatsiri iri purogiramu yakasununguka ye Windows 10 kubva kuIndel kutora uye kuvandudza maderevhiri. Izvo zvinoshandiswa zvinokubatsira kuwana mhinduro yakakodzera yefaira yeIndel yako yefaira.
Mushure mekudzivirira nekushandisa shandura yacho, icharatidza shanduro yepaIndaneti iripo yeIntel yako yekushandisa pa web browser yako.
Nzira yekugadzirisa sei Intel mutsindo wekufambisa kune shanduro yezvino?
Windows 10 zvinonongedza zvinyorwa uye kuisa shanduro yezvino yeIndel graphics mutyairi. Zvisinei, kana iwe akavhara zvinyorwa zvishandura zvinodzidzira, iwe unofanirwa kuvandudza iyo Intel graphics mutyairi kuti ichangobva kushandurwa. Heino nzira yekuzviita nayo.
Step 1: Vhura Mutariri weDareri ne kurudyi paKutanga uye nekudhonza iyo Device Device kuita.
Step 2: MuMutariri weDare, wedzerai Ratidzai adapters muti kuti uone iyo Intel graphics entry. Kungofa pamusoro payo uye ipapo bhura Update mutyairi chisarudzo. Ichi chiitiko chichazarura Update Drivers wizard.
Step 3: Baya Tsvakurudza zvakananga kuti uvandudze software yekutya chisarudzo chekudzivirira nekuisa shanduro yezvino yeIndel graphics mutyairi, kana iripo.
Gadzirisa: Nvidia Yakakwirira Tsanangudzo Audio hapana inzwi / isiri kushanda